December 2, 2016 सम्पादक बिचार
आफ्ना आमा, बुबा अनि सम्पूर्ण परिवार छाडेर कुनै एउटा केटोलाई श्रीमान् मानेर, अर्काको घरमा भित्रिएकी केटीलाई हेला गर्ने जो कोहीलाई कसैले राम्रो मान्न सक्दैन । त्यसमा पनि जसले श्रीमतीलाई हेला गर्छ, त्यो वास्तविक पति हुन सक्दैन । तर चेतनशिल प्राणी भएर पनि मानिसले कहिले काहीं चेत गुमाउँदा धेरै अप्रिय घटनाहरु हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय समाजिक सञ्जालमा भइरल भएको कुरा हो इन्जिनियर मोहन रेग्मी र उनकी पूर्व श्रीमती कञ्चन शर्माबीचको । मंसिर २ गते विहिबार कान्तिपुर टेलिभिजनमा पत्रकार सुमन खरेलले ‘सुमनसँग’ कार्यक्रममा कञ्चन शर्मा रेग्मीलाई अतिथि बनाइएको थियो । कञ्चनले सोही कार्यक्रम मार्फत आफू एउटा इन्जिनियरको श्रीमती र इन्जिनियरको आमा भएको बताएकी थिइन् । बाबु छोरा नै इन्जिनियर भएको र कान्छो छोरो पनि ठूलो भइसकेको बताउँदै कञ्चनले कयौं पटक छोराहरुलाई टक्सन गाडिमा देखेको तर, उनीहरुले वास्ता नगरेको बताएकी थिइन् ।
पक्का हो, नौ महिनासम्म कोखमा राखेर दश धारा दूध चुसाएकी एउटी आमालाई उनको सन्तानले वास्ता नगर्दाको पीडा कल्पना गर्न र त्यसलाई शब्दमा उतार्न सकिन्न । तर आमाले आफ्नो सन्तानलाई वास्ता नगरेको हो, वा छोराहरुले आमालाई ? यहाँ गंभिर प्रश्न खडा भएको छ ।
त्यसदिन कञ्चन शर्माले पतिको हेलाका कारण आफू घर छाड्न बाध्य भएको बताएकी थिइन् । तर, छोराहरुका बारेमा भने केही खुलाइनन् । जेठो छोरो कलेज र कान्छो छोरो स्कुल गएको बेलामा आफू घर छाडेर हिंडेको शर्माले बताएकी थिइन् ।
छोराहरुलाई नै नभनी उनीहरु नै नभएको बेलामा घर छाडेर हिंडेकी आमालाई उनीहरुले पनि त खोजे होलान ? खै उनीहरुको पिडा यहाँ ?
कार्यक्रम हेर्दा थाहा भयो कञ्चन शर्मा एउटा संस्थामा आश्रीत भएर बसेकी रहिछन् । कार्यक्रममा संस्थाको पनि धेरै प्रचार गरिएको छ। बेसहरा भएकाहरुलाई पालन पोषण गर्दै आएको संस्थालाइ आभार ब्यक्त गर्नुपर्छ ।
तर यस अघि पनि एक प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई एकलौटी समाचार दिएर संस्था विवादमा परेको थियो । संस्थाको आग्रहमा कञ्चनको यर्थार्थ बाहिर ल्याइएको हो भने सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले संस्थाको बारेमा पनि केही बुझ्ने कोशिष गर्नु पथ्र्यो ।
लुकेर रहेका यथार्थ र यस्ता घटनाहरुलाई बाहिर ल्याउनु पत्रकारिताको धर्म नै हो । तर, उक्त कार्यक्रममा भने एकतर्फी आवाज मात्र गुन्जियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा मोहन रेग्मी र उनका दुई छोराहरुलाई गाली गलौज गर्ने कति थिए कति । मोहन रेग्मी र उनका छोराहरु गलत थिए भने त त्यो एकोहोरो भाषणको अर्थ हुन्थ्यो होला तर यथार्थ नै नबुझी एकपक्षीय कुरा सुनी गाली गर्नेहरुले सोच्नु पथ्र्यौ, त्यो गालीको मूल्य कसले चुकाउने भनेर ?
अन्तर्वार्तामा कञ्चनले आफ्नो माइती पक्षका नभएको दावी गरेकी छिन् । तर काठमाडौंको घट्टेकुलोमा कञ्चनको बहिनीको घर रहेछ । उनकी दिदी मैतिदेवीको स्कूलमा हिस्ट्री पढाउँदी रहिछन् र आमा विराटनगरमा बस्दिरहिछ्न । दाजु अमेरिकामा रहेछन् भने भाई डोलिडारमा काम गर्दा रहेछन् । उनको मामाघर भने बानेश्वरमा रहेछ । तरपनि कञ्चनले यी कुरा अन्तर्वार्तामा किन लुकाइन ? कतै उनले कसैको दबाबमा वा चर्चामा आउन अन्तर्वार्ता दिएकी त होइनन् ? प्रश्न यता पनि ढल्किएको छ ।
कार्यक्रममार्फत कञ्चनले लोग्ने रुकुममा पोस्टिङ भएको बेला आफ्नै गहना बेचेर भए पनि उनको इच्छाविपरीत ५० हजारभन्दा बढी भर्ना खर्च तिरेर नर्सिङ पढेको भनेकी थिइन् । त्यतिमात्र होइन, बागबजारको पिके कलेजबाट बीए पास गरेको पनि भनेकी छिन् । साढे चार वर्ष त उनले ओम नर्सिङ होममा वरिष्ठ डा. भोला रिजालसँगै काम गरेको बताएकी छन् । यति धेरै पढेको र बुझेको सक्षम महिला लोग्नेले घरबाट निस्कि भन्दैमा रोडमा गएर सुत्नु पथ्र्यो त ? किन उनी महिलावादी संस्था, प्रहरी र अदालतमा जान चाहिनन् ? र एउटी सक्षम महिला भएर पनि किन काम गरेर बस्न सकिनन् ? यो पनि त अन्तर्वार्तामा खोल्नु पथ्र्यो नि होइन?
कञ्चनले २०४७ साल असार ३ गते विवाह भएको बताएकी छिन् । तर, कञ्चन र उनका पति मोहन रेग्मीबीच २०६८ साल माघ ३ मा बाजुरा जिल्ला अदालतको फैसलाले सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने बुझिएको छ । यस विषयमा पनि कार्याक्रममा खुलाइएन ।
मोहनले सबै कुरा थाहा पाएपछि प्रतिक्रिया दिदै आफ्ना छोराहरुको कुनै गल्ती नभएको बताएका छन् । तर, उनको प्रतिक्रिया कन्चनको जस्तो चर्चामा आएन । यस्तो गंभिर गाली गलौज र अपमान सहिरहेका छोराहरुका बारेका अब कसले सोच्ने त ? यसको उत्तर कसले दिने हो, कार्यक्रम प्रस्तोता, सम्बन्धित सञ्चार माध्यम कि ति गाली गर्नेहरुले ? प्रस्तुती : गोविन्द सिंह ( eFact TV बाट )